Ny Word indray dia iray amin'ny ReachOut-partner avy aminao izay voatanisa avy amin'ny tambajotra manerantany izay manohana ireo mpivarotra: Ireo fanentanana momba ny hetsika dia mandrindra anao ao amin'ny Rhapsody of Realities mandritra ireo fampielezan-kevitra.
Ilaina ny Rhapsody of Realities ho mpitarika fampianarana Baiboly, indrindra ireo minisitry ny Filazantsara. Miaraha amin'ity tambanjotran'ny fifanakalozan-kevitra ity, ary ampio ireo ministra manerantany hahita ireo harena manan-karena ao amin'ny Teny ao amin'ny Rhapsody of Realities.
Fiaraha-monina an-tserasera amin'ny olona mafana isika manararaotra ny teknolojia handresy ny tontolon'ny aterineto miaraka amin'ny Filazantsara. Miaraha amin'i Rhapsody Influencers Network (RIN) androany!
Ampidiro ny tranonkala mpandika teny maneran-tany izay ny misiôna dia ny hahatonga ny Tenin'Andriamanitra ho azon'ny olon-drehetra amin'ny fiteny izay azony tsara indrindra.
Web App App’s Rhapsody Prayer Partners
Ny tranonkala Network App ao amin'ny Rhapsody Pray Partners dia sehatra ho an'ny rehetra izay niangona mba hivavaka mba hampielezana ny Tenin'Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao, amin'ny alalan'ny Rhapsody of Realities. Miantehera anio, manaiky ny fangatahanao vavaka ary avelao hikambana amin'ny tànana amin'ny fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny hafa sy ny fiainantsika manokana!
Ny Rhapsody Daily Article Sharing Platform dia tsotra sy mora ampiasaina amin'ny rindrambaiko web izay mahatonga azy io ho mora kokoa ny mizara ny lahatsoratra isan'andro. Mamporisika izany ny fizarana indray ary amin'ny fotoana iray dia manome ny rakitra marina momba ny fanaparitahana; any amin'ny toerana iray !!
Manaova bebe kokoa amin'ny Rhapsody amin'ny zava-misy! Jereo ny Rhapsody TV, Rhapsody Travels sy Rhapsody Dailies.
Tianao ve ny hianatra hiaina fiainana mandresy sy mandanjalanja? Mitady fampianarana lalina sy valiny mifototra amin'ny teny amin'ny fanontaniana maro momba ny fiainana ve ianao? Hahita traikefa be dia be ny tranon'ny voahosotra maro be, ary hanova ny fiainanareo mandrakizay! Ity tranonkala ity dia teboka iray ho an'ny boky rehetra nosoratan'ny mpanoratra marobe, Pastora Chris Oyakhilome D.Sc., D.D.
Manandrama ny Rhapsody amin'ny zava-misy erỳ! Izy io dia tontolo manerantany vaovao amin'ny fitaomam-panahy sy ny hery avy any an-danitra izay nofonosina tao amin'ny Rhapsody tsara tarehy izay tena noforonina ho an'ny Realities Mobile app.